ဥယျာဉ်တော်ပိုးမွှား | သြဂုတ်လ 2021
2021 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: ဥယျာဉ်တော်ပိုးမွှား
ဤစက်ဆုပ်ဖွယ်အမှားများကသင်၏ဥယျာဉ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဂျပန်ပိုးတောင်မာများကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။ ၎င်းတို့အားပြန်လာခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်လေ့လာပါ။
ပုရွက်ဆိတ်တွေကိုသဘာဝကျကျဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ - ၁၃ ပုရွက်ဆိတ်ထိန်းချုပ်ရေးအချက်များ
သင့်အိမ်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်တွင်တွေ့ရမည့်ဘုံပုရွက်ဆိတ်မျိုးစိတ် ၆ ခုနှင့်အတူပုရွက်ဆိတ်များကိုသဘာဝကျကျဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်း ၁၃ ခုရှိသည်။
ဂေါ်ဖီထုပ်များ - Trichoplusia Ni နှင့်၎င်းတို့အားမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်အကြောင်း
ဂေါ်ဖီထုပ်ကွင်းဆက် (Trichoplusia ni) သည်သင်ဂရုမစိုက်ပါကဂေါ်ဖီထုပ်များ (နှင့်အခြားအရာများ) ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့်ခူကောင်ငယ်များကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဤနေရာတွင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့လေ့လာပါ။
နှံကောင်များဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ - သဘာဝနှံကောင်ထိန်းချုပ်ရေး
earwig ပြproblemsနာများရှိပါသလား ကျွန်တော်တို့ဟာ earwigs တွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးထားတယ်။ တကယ်လို့သူတို့ဟာသူတို့ဖန်တီးထားသလိုဆိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်!
စတော်ဘယ်ရီအမြစ်များပြProbleနာများ - သင်၏ Berry သီးများကိုကာကွယ်ပါ
စတော်ဘယ်ရီအပင်ပိုးများသည်အရွက်ပေါ်တွင် munches, နှင့်လောင်း berry သီးအမြစ်များကိုလောင်။ ငါတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ကသင်၏သီးတွေကိုသူတို့ထံမှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုမျှဝေသည်။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဂေါ်ဖီထုပ် Worms များကိုဖယ်ရှားနည်း
မက္ကဆီကို Bean Beetle - Epilachna Varivestis ကိုဖယ်ရှားပါ
အပင်နားမလည်ဘဲအဝါရောင်? သငျသညျအမြစ်ထုံး nematode ကျခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအဏုကပ်ပါးပိုးကပ်ပါးကောင်များအကြောင်းနှင့်၎င်းတို့နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုလေ့လာပါ။
စပျစ်နွယ်ပင် Borer ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး
Squash စပျစ်နွယ်ပင် Borer ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမျှဟာသပါ! သင်၏ squash အပင်များကိုကယ်တင်ပြီးမြောက်အမေရိကပိုးမွှားကိုတိုက်ဖျက်ရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာပါ။
ကညွတ်ပိုးတောင်မာများ - Crioceris မျိုးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ
ကညွတ်သည်ကြီးထွားရန်ခဏကြာသော်လည်းသင်၏အဖိုးတန်သီးနှံများကိုဖျက်ဆီးသည့်ကညွတ်ပိုးတောင်မာများထက် ပို၍ စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ ဤအကြံပြုချက်များနှင့်အတူသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
Rat Proof ဥယျာဉ်: ဥယျာဉ် Spaces တွင်ကြွက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လို
ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးပုရွက်ဆိတ်လူသတ်သမားများ - ၂၀၂၁ ထုတ်ဝေမှု
ကမ္ဘာပေါ်တွင်သန်းချီသောပုရွက်ဆိတ်များရှိသည်၊ သို့သော်သင်၏အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်တွင်သူတို့သည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သင်၏ပြproblemနာအတွက်မည်သည့်အကောင်းဆုံးပုရွက်ဆိတ်လူသတ်သမားသည်မည်သည့်အရာနှင့်မှန်ကန်ကြောင်းလေ့လာပါ။
ခရမ်းချဉ်သီး Hornworms: Manduca Quinquemaculata ကိုသုတ်ပစ်
ခရမ်းချဉ်သီး hornworms ခရမ်းချဉ်သီးပင်များကိုအလျင်အမြန်မီးဖြင့်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ အချို့သောပြင်ဆင်မှုနှင့်ဂရုတစိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်သင်သည်ဤဥယျာဉ်ပိုးမွှားကိုထာဝရဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
သခွားသီးပိုးတိုက်ပွဲ - ဤပိုးမွှားများကိုသင်၏ဥယျာဉ်မှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
Spruce Budworm: အနှံဖြူနှေးခြင်း
အဆိုပါ spruce budworm သည်သစ်သီးပင်မျိုးစိတ်များ၏အသုံးအများဆုံးပိုးမွှားဖြစ်သည်။ ဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့လောင်းတွေအကြောင်းလေ့လာပြီးဘယ်လိုစီမံရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပါ။
အင်းဆက်ပိုးမွှားများ - ကုသခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း
ရွက် roller: Caterpillar အန္တရာယ်များကို Munching
သစ်သီးများနှင့်တန်ဆာဆင်သစ်ပင်များကိုတိုက်ခိုက်သောအရွက် roller အမျိုးမျိုးရှိသည်။ လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်အကြောင်းအကြံဥာဏ်များကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။
ပိုးဖလံ - သစ်ပင်များတွင်သစ်သီးပိုးကောင်များကိုရှောင်ခြင်း
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်တစ်ခုအတွက်စိုက်ပျိုး box ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ